Abaphosela amaProteas babheke ukunqoba okuzobanqobela i-series
uKagiso Rabada ophosela amaStandard Bank Proteas uzwa sengathi kuningi okusele kwi-wicket ukuthola ama-wickets eSri Lanka ayisithupha ukuze banqobe umdlalo wesibili weSunfoil Test ePPC Newlands eKapa. uRabada uthathe ama-wickets amabili abalulekile, kulama-wickets amane aphumile kumjaho werekhodi weSri Lanka ka-507 futhi bazobe bebheke ukuxhapaza isimo somdlalo uma sebefuna ama-wickets asele.
iWicket-keeper batsman, uDinesh Chandimal (28 not out) nokapteni, uAngelo Mathews (29 not out) baqunge isibindi ngesikhathi sokuhlasela ngaphambi kokuphela kosuku, ngosuku lwesithathu, futhi babhekene nobunzima njengoba besadinga ama-runs angu-377 ukuze banqobe.
“Kune-pace kanye ne-bounce,” uRabada ekhuluma ngesimo. “Emuva kokuthi udlule kwibhola elisha, ungathola ama-runs, abashayayo kithina bakuvezile lokho. I-wicket ongangeni kakhulu kuyona, amanye azogxuma, eyodwa izompintsha, elilodwa ibhola lingaziphatha kabi futhi lifake abashayi enkingeni. Awukwazi ukukhululeka lapha, kune-bounce ne-pace, yilokho esizokusebenzisa uma ibhola seliguga. Sizohlela amasu ethu futhi sifike lapha kusasa futhi senzenjalo.”
Lomdlali oneminyaka engu-21 uvumile ukuthi wadonsa kanzima kumdlalo wokuqala ePort Elizabeth kodwa ngathi usephindelile kwisimo sakhe esibhubhisayo emuva kokuthatha u-4/37 kwi-innings yokuqala futhi egijima ngokuhlasela nokuzimisela kwi-innings yesibili yeSri Lanka.
“Ngiphose kaningi futhi isingcono i-rhythm yami ngokuphosa,” esho echaza uRabada. “Ngicabanga ukuthi uma uthola isikhathi ungadlali, kumele uphumule. Uma kudingeka ukuthi uphose, kumele uphose ukuze uzibeke ezingeni eliphezulu ongaba kulona. Ayikho indawo yokuthi uphumule uma ungaphosi kahle.”
uPhilander noRabada bavula indlela kusekusha Iphupho laseNewlands liqhubekela uPhilander uRabada noPhilander bamangaza iSri Lanka Ikhulu laElgar lisuse ukucasuka kwakhe uElgar noDe Kock bahambisa usuku lokuqala ngendlela yeSouth Africa uAbbott uhlaselile ukuze aqedele ukunqoba kwamaProteas Abaphosi bazimisele ngobunzima ngosuku lokugcina Rabada, Mendis go head to head in a clash of young titans uRabada noMendis bayaqhudelana njengentsha enamandla iSri Lanka ilwa nesimo ukuze iwalandele eduze amaProteas uDe Kock noPhilander bangukhiye kwi-innings yokuqala enkulu